BETAFO - ANTSIRABE : Renim-pianakaviana iray nitifitra nahafaty ny zanak’anadahiny
Ramatoa iray no nahatratraran’ny zandary tao Farihimena, distrikan’i Betafo, Faritra Vakinankaratra basy poleta roa sy bala maromaro ny faran’ny herinandro teo. 5 avril 2018
Noho ny fampitam-baovao avy tamin’ny olona tsara sitrapo no nahazoan’ireo mpitandro filaminana ny vaovao ka nosamborana ity renim-pianakaviana ity. Raha iverenana ny zava-niseho tao Farihimena, tamin’ ny alahady 19 marsa lasa teo dia renim-pianakaviana iray no nitondra ny zanany lahy sy ny zanaky ny anadahiny, vavikely vao 15 taona.
Saika handeha hivarotra basy an-tsokosoko no nivoahan’ ilay ramatoa ny trano, kinanjo teny an-dalana dia navoakany ny basy iray izay misy bala ka voakitikitiny tampoka. Nipoaka ny basy ary nahavoa ny zanaky ny anadahiny ka maty avy hatrany ity farany. Tsy hitan’izy mianaka izay atao fa niverina nody tany an-tanàna nitondra ny razana. Tonga tany dia nanontanian’ireo fianakaviany ilay nahavanon-doza nefa tsy sahy nilaza ny marina fa nolazainy fa voadonan’ny omby io namoy ny ainy io.
Rehefa nojeren’ny dokotera anefa ny razana dia hita fa tsy mazava ny nahafaty ilay zazavavikely ary tsy araka ny filazan’ireo fianakaviany akory. Nandray fepetra avy hatrany ilay mpitsabo ka nampandre ny mpitandro filaminana tao Betafo. Taorian’ny fampandrenesana dia nidina ifotony ny zandary sady niroso tamin’ny fisavana ny tranon’ity renim-pianakaviana nahavanon-doza ity.
Mbola tra-tehaka tao an-tranony ny basy nitifirany io zaza io sy ny basy iray hafa saika hamidiny ary bala maromaro. Hita tao ihany koa ny loko saika handokoany ireo fitaovam-piadiana mialohan’ny hamarotany azy. Noentin’ireo mpitandro filaminana natao fanadihadiana avy hatrany ity farany sy ireo fianakaviany sasan-tsasany ka nandritry ny famotorana natao azy no nilazany marina fa izy no namono io zaza io. Efa naiditra am-ponja ny faran’ny herinandro teo tany an-toerana ity renim-pianakaviana nandatsa-dra ny havany ity. Mitohy kosa ny fikarohana ireo namany nahitany ireo fitaovam-piadiana ireo.
Nifarana tamin’ny fifandonana ny fifampiarahabana nahatratra ny taona MPANAKANTON’I MAHAJANGA (159) 10 février 2019 Voasambotra omaly teny Antsahabe MBOLA RAJAONAH (95) 13 février 2019 Olona fito voasambotry ny mpitandro filaminana FANAFIHANA MITAM-BASY TETO MAHAJANGA (87) 12 février 2019 Mbola misy ny tsy matimanota miriaria RAHARAHA AMBOHIMAHAMASINA (84) 13 février 2019 Nahitana fatim-behivavy iray tsy misy tanana sy tongotra ANKARAOBATO ANKADILALAMPOTSY (83) 13 février 2019 Nigadona soa aman-tsara teto an-tanindrazana omaly FILOHA ANDRY RAJOELINA (81) 12 février 2019